အေးနေဝင်းကတောင်းဆိုလို့ ပန်းချီဆွဲပေးရတာပါဆိုတဲ့ ဟန်တီ...! - Thadin
HomeCELEBRITYအေးနေဝင်းကတောင်းဆိုလို့ ပန်းချီဆွဲပေးရတာပါဆိုတဲ့ ဟန်တီ…!
အေးနေဝင်းကတောင်းဆိုလို့ ပန်းချီဆွဲပေးရတာပါဆိုတဲ့ ဟန်တီ…!
February 1, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on အေးနေဝင်းကတောင်းဆိုလို့ ပန်းချီဆွဲပေးရတာပါဆိုတဲ့ ဟန်တီ…!
လူတွေက အေးနေဝင်းနဲ့ ရွှေအိမ်စည်တို့နှစ်ပါးကြည်နေချိန်တုန်းက အေးနေဝင်းက ရွှေအိမ်စည်ကို ကိတ်မုန့်နဲ့ surprise လုပ်တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးမှာ ဟန်တီက အေးနေဝင်းနဲ့ရွှေအိမ်စည်နားမှာရပ်ပြီးကြည့်နေခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ အခုတစ်ဖန်အေးနေဝင်းကို ပုံတူပန်းချီကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ဓာတ်ပုံကိုတွဲပြီး “မင်းမကြည့်လို့မသိတာပါ အချစ်ကမင်းအနားမှာပါ။ မင်းမကြည့်လို့မရိပ်မိတာပါ အချစ်ကမင်းအနားမှာပါ”ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားတွေနဲ့ Facebook တစ်ခွင်အုတ်သြော်သောင်းတင်းဖြစ်အောင်ကို Troll နေကြတာပလူပျံလို့နေတာပါပဲ။
အဲဒီကိစ္စကိုရွှေအိမ်စည်လည်းတွေ့လိုက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လားမသိ.. ရွှေအိမ်စည်က 31.1.2019 နေ့လည် နှစ်နာရီခွဲခန့်မှာ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ “မင်းမကြည့်လို့မသိတာပါ အချစ်ကမင်းအနားမှာပါ စိတ်မရှိလို့မရိပ်မိတာပါ အချစ်ရမင်းအနားမှာပါ ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး သီချင်းလေးကထိရှနေသလားလို့ ဒီမနက် ဒီသီချင်းလေးကခေါင်းထဲမှာစွဲနေလို့ #hahahhaa #morningvibes”လို့ ရေးတင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဟန်တီကလည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့် စိတ်နှလုံးညစ်နွမ်းရကြောင်းနဲ့ အဲဒါကြောင့် အေးနေဝင်းနဲ့တောင် Facebook ပေါ်မှာ Friend မဟုတ်တော့ပါကြောင်းနဲ့ ပန်းချီကလည်း ပုံတူဆွဲပေးဖို့တောင်းဆိုလို့ ဆွဲပေးခဲ့တာပါလို့အဓိပ္ပါယ်ရောက်တဲ့ စာကိုတင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဟန်တီက “လူတိုင်းကို ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ခင်မင်တတ်သော ဟန်တီနှင့်မေမေတို့ကြောင့် ယခုအခါတွင် ပရိသတ်များ ကြားအထင်အမြင်လွဲမှားနေသော အကြောင်းတခုကို ဖြေရှင်းပါရစေ။ဟန်တီ ပန်းချီဆွဲတတ်သည်ကို သိရှိသည့် ပို့စ်တင်သည့် ကာယကံပိုင်ရှင် ဟန်တီ့ပရိသတ်တဦးမှ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ပုံတူပန်းချီဆွဲပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က အချိန်အားလပ်သဖြင့် ဆွဲပေးထားသောပုံလေးကို အခါအခွင့်ကြုံ၍ ယခု ခရီးသွားခါနီးမှ ပေးဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဟန်တီနှင့်သာမန်ခင်မင်သည့် မိတ်ဆွေတဦးသာဖြစ်ပြီး မည်သို့မျှပတ်သက်ခြင်းမရှိပဲ ပရိသတ်များထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းခံရသည့်အတွက် စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရပါသောကြောင့် ဟန်တီနှင့် မည်သို့မျှဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပဲ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တွင်ပင် ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်းမရှိတော့ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်”လို့ ရေးထားခဲ့ပါတယ်။
ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးရော ကောလဟလတွေကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့အခင်အမင်ပျက်ရတာနှမျောစရာကောင်းတယ်လို့မထင်ကြဘူးလား။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးတင်ချတတ်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ကိုရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပန်းချီကားလေးကတော့ လက်ရာမြောက်တယ်လို့မထင်ကြဘူးလား။ ပြောခဲ့ကြပါဦး။
လူတှကေ အေးနဝေငျးနဲ့ ရှအေိမျစညျတို့နှဈပါးကွညျနခြေိနျတုနျးက အေးနဝေငျးက ရှအေိမျစညျကို ကိတျမုနျ့နဲ့ surprise လုပျတဲ့ ဓာတျပုံလေးမှာ ဟနျတီက အေးနဝေငျးနဲ့ရှအေိမျစညျနားမှာရပျပွီးကွညျ့နခေဲ့တဲ့ ဓာတျပုံနဲ့ အခုတဈဖနျအေးနဝေငျးကို ပုံတူပနျးခြီကားလကျဆောငျပေးတဲ့ ဓာတျပုံကိုတှဲပွီး “မငျးမကွညျ့လို့မသိတာပါ အခဈြကမငျးအနားမှာပါ။
မငျးမကွညျ့လို့မရိပျမိတာပါ အခဈြကမငျးအနားမှာပါ”ဆိုတဲ့ သီခငျြးစာသားတှနေဲ့ Facebook တဈခှငျအုတျသွျောသောငျးတငျးဖွဈအောငျကို Troll နကွေတာပလူပြံလို့နတောပါပဲ။အဲဒီကိစ်စကိုရှအေိမျစညျလညျးတှလေို့ကျပုံပျေါပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့လားမသိ.. ရှအေိမျစညျက 31.1.2019 နလေ့ညျ နှဈနာရီခှဲခနျ့မှာ သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ “မငျးမကွညျ့လို့မသိတာပါ အခဈြကမငျးအနားမှာပါ စိတျမရှိလို့မရိပျမိတာပါ အခဈြရမငျးအနားမှာပါ ဘာရယျဟုတျပါဘူး သီခငျြးလေးကထိရှနသေလားလို့ ဒီမနကျ ဒီသီခငျြးလေးကခေါငျးထဲမှာစှဲနလေို့ #hahahhaa #morningvibes”လို့ ရေးတငျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဟနျတီကလညျး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျကနေ ပရိသတျတှရေဲ့ဝဖေနျပွောဆိုမှုတှကွေောငျ့ စိတျနှလုံးညဈနှမျးရကွောငျးနဲ့ အဲဒါကွောငျ့ အေးနဝေငျးနဲ့တောငျ Facebook ပျေါမှာ Friend မဟုတျတော့ပါကွောငျးနဲ့ ပနျးခြီကလညျး ပုံတူဆှဲပေးဖို့တောငျးဆိုလို့ ဆှဲပေးခဲ့တာပါလို့အဓိပ်ပါယျရောကျတဲ့ စာကိုတငျလာခဲ့ပါတယျ။
ဟနျတီက “လူတိုငျးကို ရိုးသားပှငျ့လငျးစှာ ခငျမငျတတျသော ဟနျတီနှငျ့မမေတေို့ကွောငျ့ ယခုအခါတှငျ ပရိသတျမြား ကွားအထငျအမွငျလှဲမှားနသေော အကွောငျးတခုကို ဖွရှေငျးပါရစေ။ဟနျတီ ပနျးခြီဆှဲတတျသညျကို သိရှိသညျ့ ပို့ဈတငျသညျ့ ကာယကံပိုငျရှငျ ဟနျတီ့ပရိသတျတဦးမှ မှေးနလေ့ကျဆောငျအဖွဈ ပုံတူပနျးခြီဆှဲပေးရနျ တောငျးဆိုခဲ့သဖွငျ့လှနျခဲ့သောနှဈနှဈက အခြိနျအားလပျသဖွငျ့ ဆှဲပေးထားသောပုံလေးကို အခါအခှငျ့ကွုံ၍ ယခု ခရီးသှားခါနီးမှ ပေးဖွဈခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။
ဟနျတီနှငျ့သာမနျခငျမငျသညျ့ မိတျဆှတေဦးသာဖွဈပွီး မညျသို့မြှပတျသကျခွငျးမရှိပဲ ပရိသတျမြားထငျယောငျထငျမှားဖွဈခွငျးခံရသညျ့အတှကျ စိတျပငျပနျးနှမျးနယျရပါသောကွောငျ့ ဟနျတီနှငျ့ မညျသို့မြှဆကျနှယျခွငျးမရှိပဲ ဖဘေု့တျပျေါတှငျပငျ ခငျမငျရငျးနှီးခွငျးမရှိတော့ပါကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ”လို့ ရေးထားခဲ့ပါတယျ။
ပွောခငျြလှနျးလို့ပရိသတျကွီးရော ကောလဟလတှကွေောငျ့တဈစုံတဈယောကျနဲ့အခငျအမငျပကျြရတာနှမြောစရာကောငျးတယျလို့မထငျကွဘူးလား။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးကွီးတငျခတြတျတဲ့ ရှအေိမျစညျကိုရောဘယျလိုမွငျကွလဲ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ပနျးခြီကားလေးကတော့ လကျရာမွောကျတယျလို့မထငျကွဘူးလား။ ပွောခဲ့ကွပါဦး။
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် … ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် (၁) လစာ ဟောစာတမ်း..!
This Month : 34525
This Year : 175982
Total Users : 535006
Total views : 2419212